Cristiano Ronaldo Oo Go'aan Rasmi Ah Ka Gaaray Mustaqbalkiisa Juventus - Laacib
HomeSerie ACristiano Ronaldo Oo Go’aan Rasmi Ah Ka Gaaray Mustaqbalkiisa Juventus
Cristiano Ronaldo Oo Go’aan Rasmi Ah Ka Gaaray Mustaqbalkiisa Juventus
July 16, 2021 Saed Mohamed Serie A, Suuqa Kala Iibsiga, Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Sida ay sheegtay jariirada La Gazzetta dello Sport, Cristiano Ronaldo ayaa xaqiijiyay inuu sii joogayo Juventus halka wakiilkiisa Jorge Mendes uu ku cadaadinayo kooxda Talyaaniga inay hal sanno ku kordhiyaan qandaraaskiisa.
Qandaraaska Ronaldo ee Juventus ayaa dhacaya bisha Juun 2022, mustaqbalkiisa Turin ayaana u muuqatay mid shaki uu ku jiro dhamaadkii xilli ciyaareedkii 2020-21.
PSG iyo Manchester United ayaa lagu waramayay inay xiiseynayeen saxiixiisa inkastoo ay u cadeeyeen inaysan bixin karin mushaharkiisa sannadlaha ee gaaraya 31 milyan euro.
Midkoodna Juventus ama Ronaldo ma aysan helin wax dalab rasmi ah weli. Sidaasi darteed 36 jirkaanayaa u muuqda mid sii joogaya kooxda ugu yaraan ilaa iyo dhamaadka xilli ciyaareedka soo socda.
Sida ay sheegtay La Gazzetta dello Sport, xiddigii hore ee Real Madrid ayaa ku wargeliyay kooxda inuu garoonka tababarka ku soo laabanayo 25ka bishaan July si uu isagu diyaariyo xilli ciyaareedka cusub.
Ronaldo ayaa haatan fasax ku maqan ka dib markii uu ka qeyb galay koobkii Qaramada Yurub halka tababare Max Allegri uu bilaabay shaqadiisa tababarenimo ee Juventus labo maalmood ka hor.
Wargeyska ayaa sidoo kale sheegay in wakiilka Ronaldo oo lagu magacaabo Jorge Mendes inuu ku cadaadinayo kooxda Talyaaniga inay xiddigaan hal sanno ugu kordhiso qandaraaskiisa laakiin Juve weli wax jawaab rasmi ah kama aysan bixinin.
Labada dhinac ayaa geli doona wadahadalo qandaraas kordhin ah marka madaxweynaha Juventus Andrea Agnelli uu ka soo laabto fasaxiisa.